अन्यौलका बीच आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको मस्यौदा तयार, के के छन् विशेषता ? « Janata Samachar
अन्यौलका बीच आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको मस्यौदा तयार, के के छन् विशेषता ?
प्रकाशित मिति : जेठ ५, २०७८ बुधबार
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गरेको छ । बजेट लेखन कार्यदलले मस्यौदा लेखनकार्य सकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या र निषेधाज्ञाले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबीच कस्तो बजेट आउला भन्नेमा सबैको चासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस पटक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्रै झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी अर्थलाई गराएको छ ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसै अनुरुप मन्त्रालयको बजेट लेखन कार्यदलले मस्यौदा लेखन कार्य सकाएको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिए पनि अझैसम्म संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छैन । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विश्वासको मत लिन बाँकी छ । विश्वासको मत नलिइ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशहरण महत लगायतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
त्यसैले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके संसद्बाटबाटै बजेट ल्याउँछन् अथवा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने हो भन्ने विषय अहिले अन्योलमा नै रहेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसअघि नै संसद् जिउँदै रहेकोले संसदबाटै बजेट आउने जानकारी दिनुभउको छ ।
तर, अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएकोले बजेटको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउने सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक उतार–चढावले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ ।
मंगलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अहिलेको स्वस्थ्य समस्या र उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिने बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।